အီလက်ထရွန်းနစ်တံဆိပ်ထုခြင်း။ ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ ဖြန့်ဝေသူနှင့်စက်ရုံမှ အီလက်ထရွန်းနစ်တံဆိပ်ထုခြင်း။ အကြောင်းသင်သိရန်လိုအပ်သည်။
Tong Na Enterprise Co., Ltd. ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူအတွက်အထူးပြု အီလက်ထရွန်းနစ်တံဆိပ်ထုခြင်း။ရှိစက်ရုံတစ်ရုံနှင့်အတူ Taiwan။ ဒါဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏တန်ခိုးအဖြစ်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဆန်းသစ်တီထွင်မှုကြာပါသည်။ ဒါဟာအဆက်မပြတ်အသစ်ထွက်ကုန်သီးနှံသုတေသန, ခေါင်းပုံဖြတ်ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုသူ့ကိုယ်သူတင်နိုင်ရှိပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအများအပြားနိုင်ငံတကာကျော်ကြားကုမ္ပဏီများအတွက်ရေရှည်ထုတ်လုပ်မှုကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းဖြစ်ပါတယ်။
ပုံစံ - 4-1
အီလက်ထရွန်းနစ်ဆက်သွယ်ရေး အစိတ်အပိုင်းများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။’၎-ထုတ်ကုန်ရောင်း,အီလက်ထရွန်းနစ် အမှတ်တံဆိပ်ကြီးများ အသုံးပြုသည်။.ဒေသတွင်းနှင့် အရှေ့တောင်အာရှရှိ အခြားဒေသများတွင် အသုံးပြုသည့် အစိတ်အပိုင်းများ.
273 အီလက်ထရွန်းနစ် အစိတ်အပိုင်းများ,Battery Contact Spring,၃.24*3.33mm
ကွန်ပြူတာများ,လျှပ်စစ်ပစ္စည်း,Mobile Phone နှင့်ပတ်သက်သော တံဆိပ်တုံး အစိတ်အပိုင်းများ
TT45~ငွေပေးချေမှုအတွက် ရက် 60
ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်အရ,ပုံဆွဲခြင်းလုပ်ငန်းနှင့် ထုတ်လုပ်မှု,နမူနာစမ်းသပ်မှုပေးနိုင်သည်။,၂.5D ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တိုင်းတာခြင်း။,စဉ်ဆက်မပြတ်မှိုထုတ်လုပ်မှုမြန်ဆန်တည်ငြိမ်.
TS16949 နှင့် ISO90001 Certificate နှစ်ခုလုံး
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.stampingparts.org/my/electronic-stamping.html
အကောင်းဆုံး အီလက်ထရွန်းနစ်တံဆိပ်ထုခြင်း။ ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက်သင်သည် အီလက်ထရွန်းနစ်တံဆိပ်ထုခြင်း။ မှထုတ်လုပ်သော၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံ